रिक्सा राज र सद्दे नभेटिने गाडी - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
यज्ञराज जोशी असोज ४
काठमाडौँको कोटेश्वर-भक्तपुर सडक खण्ड सबैभन्दा जाम हुने सडकका रुपमा लिइन्छ। जामका कारण उक्त सडक खण्डमा चल्ने गाडीका लामो लहरसहितका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहन्छन्।
पोष्टमात्रै कहाँ हुन्छन् र? तस्वीरसहित प्रधानमन्त्री, ट्राफिक प्रहरी र ‘हेलो सरकार’ लाई समेत ‘मेन्सन’ गर्दै हामी सत्तो-सराप गर्न पछि पर्दैनौँ। पाँच मिनेटमात्रै ‘भीभीआइपी’ को सवारी आउँदा आफू रोकिनुपर्‍यो भने हामी लोकतन्त्र, सम्विधान अनि मौलिक हकका नारा लगाउँछौँ। राजतन्त्र र अहिले केही फरक भएन भन्दै गणतन्त्रलाई सराप्न समेत पछि पर्दैनौँ।
तर, गत महिना बंगलादेशको राजधानी ढाकामा १० दिने बसाईका क्रममा देखेको र भोगेको ट्राफिक जाम भोग्नु परेपछि मलाई लाग्यो, नेपालका सडकमा देखिने जाम त सामान्य पो रहेछ।
ढाकाको हरेक यात्रामा हामीले झेलेको सबैभन्दा मुख्य समस्या ट्राफिक जाम थियो। र, बंगलादेशी सडकमा कायम ‘रिक्सा राज’ त्यसको मुख्य कारण।
अघिल्लो बर्ष ‘ढाका सिटी कर्पोरेशन’ ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार ढाकामा लाइसेन्स लिएका मात्रै ७९ हजार पाँच सय ५४ रिक्सा चल्छन्। त्यो सरकारी तथ्यांक हो। विभिन्न रिपोर्टहरुले झण्डै एक लाख भन्दा बढी रिक्सा यहाँ सञ्चालनमा रहेको देखाएका छन्।
विश्व बैकको एक प्रतिवेदन अनुसार विगत १० वर्षमा ढाकामा औषत ट्राफिक स्पिड ७ देखि २१ किलोमिटर प्रतिघन्टा मात्रै छ। यही क्रम जारी रहे सन् २०३५ सम्म ढाकामा एक घन्टामा ४ किलोमिटर भन्दा बढी गाडी कुदाउन नसकिने त्यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। ट्राफिक जामले गर्दा दिनमा झण्डै ५ मिलियन घण्टा काम गर्ने समय खेर गइरहेको र त्यसले वार्षिक ११.४ बिलियन अमेरिकी डलर गुमिरहेको पनि उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ।
हामी ढाका अोर्लिदा विमानस्थलबाट हाम्रो बस्ने होटल त्यस्तै ४५ मिनेटको दूरीमा रहेछ। तर विमानस्थलबाट तीन बजे होटलका लागि हिडेका हामी ट्राफिक जामकै कारणसाँझ सात बजेमात्रै होटल पुगेका थियौं।
कतिसम्म भने, ट्राफिक जामकै कारण हामी सबैको ‘प्रि-म्याच कन्फ्रेन्स’ नै छुटेको थियो। फर्किने दिन चाहिँ बिहान सबेरै होटलबाट निस्केका थियौँ। त्यसैले, करिव ४५ मिनेटमा विमानस्थल पुग्यौँ।
यस्तो जटिल समस्या हुँदा पनि बंगलादेशले किन रिक्सा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त? बंगलादेशको ट्राफिकबाट आजित मैले एकजना स्थानीय पत्रकारसँग प्रश्न राखेँ।
उनले भने, ‘ढाकामा विभिन्न आर्थिक बर्गका मानिसहरु छन्, सबैले गाडी चढ्न सक्दैनन्। ती मानिसहरु रिक्सा चढ्छन्। बेरोजगारी न्यूनिकरणमा पनि रिक्साले केही हदसम्म सघाएको छ।’
बंगलादेशलाई विश्वमै सस्तो मजदुर पाइने देशमा लिइन्छ। ‘आँखोदेखा’ तथ्यले स्थानीय पत्रकारको भनाईलाई पुष्टि गथ्र्यो। तथ्याङ्कहरुले पनि यस्तै बताउँदो रहेछन्।
बंगलादेशी यातायात विभागको तथ्यांक अनुसार ढाकामा १० प्रतिशतले निजी सवारी साधन चढ्छन्। २५ प्रतिशतले सार्वजनिक बस तथा ५ प्रतिशतले अटो रिक्सा चढ्दा रहेछन्। बाँकी ६० प्रतिशतका लागि रिक्सा नै सहज सवारी साधन रहेछ।
ढाका पुगेपछि हामी नेपाली पत्रकारहरुले छलफल गरेका थियौँ, यहाँको सरकारले किन रिक्सा हटाउन नसकेको होला?
अनि ठट्टैठट्टामा निष्कर्ष निकालेका थियौँ, ‘रिक्सा हटाउने निर्णय गर्‍यो भने यहाँको सरकार नै ढल्छ होला।’
रिक्सासँग आवद्ध संगठनमात्रै २८ वटा रहेछन्। ‘भोट ब्यांक’ जोगाउन पनि रिक्सावालहरुले राजनैतिक संरक्षण पाइरहेका स्पष्टै थियो।
नेपालमा एउटा गाडीले अर्काे गाडीलाई छोयो भनेमात्रै पनि निकै ठूलो बबाल मच्चिन्छ। कसैको गाडीले छुस्स छुनु हुँदैन, अक्सर नेपालीहरु मध्यबाटोमै गाडी रोकेर झगडा गर्न तम्सिन्छन्। त्यसैलेपनि ट्राफिक जाम बढ्छ। ठोकिएको ठाउँमा सानो दाग लाग्यो भनेपनि जरिवाना तिराइन्छ। कतिपय ‘केश’ त प्रहरीकोमा नै पुग्छ।
तर, ढाकावासी यस्ता मामिलामा निकै नरम रहेछन्। त्यहाँ एक गाडीले अर्को गाडीलाई ठोक्नु सामान्य मानिदो रहेछ। यस्तो भएपछि एउटा गाडीले अर्को गाडीलाई गर्ने ‘ओभर टेक’ पनि सामान्य हुने भइहाल्यो।
एउटा गाडी रोकिएको छ भने पछाडिबाट आएको अर्काे गाडीले ठक्कर दिइहाल्थ्यो। परिणाम, ढाकामा हामीले कुनैपनि सार्वजनिक यातायात सद्दे देख्न पाएनौँ। प्रत्येक बसले अर्को सवारीलाई ठक्कर दिएकै हुने, नकोरिएको कुनै गाडी नभेटिने।
त्यही भएर यहाँको सडक दुर्घटनाको ग्राफ पनि उकालो शिखरमा पुगेको रहेछ। ‘बंगलादेश रोड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी’ का अनुसार, बंगलादेशमा ३.१ मिलियन दर्ता भएका सवारी छन्। त्यसमध्ये ढाकामा एक मिलियन सवारी साधन गुड्छन्। जसमा ७२ प्रतिशत गाडीहरु बिग्रेका, केरकार भएका, ठोक्किएका छन्।
‘पेसेन्जर्स वेलफेयर एशोसियसन’ ले गरेको एक अध्ययन अनुसार, ८७ प्रतिशत सवारीले बंगलादेशमा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्छन्। परिणाम, प्रत्येक दिन ६४ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै १ सय ५० जना घाइते हुन्छन्। जनवरी-अप्रिल (सन् २०१८) बंगलादेशमा सवारी दुर्घटनामा १ हजार ८ सय ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, साढे ५ हजार घाइते भएका छन्।
यो तथ्याङ्क देखेपछि लाग्यो, ट्राफिक नियम उल्लंघन र सवारी दुर्घटना त्यहाँ सामान्य जस्तै भइसकेको रहेछ।
ढाका डायरी १: विमानका ती सिट पार्टनर
ढाका डायरी २: माया स्वदेशकै छ ज्यान परदेशमा भए पनि
प्रकाशित ४ असोज २०७५, बिहिबार | 2018-09-20 18:39:52